आईओएस १ आईफोन S एस र आईफोन एसई | मा पुग्न सक्दैन आईफोन समाचार
परी गोन्जालेज | | iOS 15, हाम्रो बारेमा
२०२० एप्पलको लागि पनि एक अनौंठो वर्ष हो। जुन WWDC मा उनले प्रस्तुत गरे iOS 14 र macOS बिग सुर। आईडीभिसिसका लागि नयाँ अपरेटि system प्रणालीले तिनीहरूलाई आईओएस १ as को रूपमा उस्तै उपकरणहरूमा स्थापना गर्न अनुमति दियो। त्यो हो, आईओएस १ comp अनुकूलता उज्ज्वल थियो। यद्यपि, म्याकोस बिग सुरले २०१२ को मध्यदेखि अप्रियबाट म्याकबुक प्रो जस्ता केही कम्प्युटरहरू बनाइसकेका छन्। नयाँ आईओएस १ 2012 को समाचार जान्न आधा बर्ष भन्दा बढी बर्ष भइसकेको छ, त्यहाँ त्यस्ता हल्लाहरू पहिले नै छन्। फोन S एस र आईफोन एसई, दुबै A6 चिपको साथ, आईओएसको यो नयाँ संस्करणसँग उपयुक्त छैन।
के आईफोन S एस र आईफोन एसईले आईओएस १ to लाई बिदाइ दिनेछ?
आईफोन S एस र S एस प्लसले सेप्टेम्बर २०१ the मा प्रकाश देख्यो जबकि पहिलो पुस्ता आईफोन एसईले मार्च २०१6मा देख्यो। दुबै उपकरणहरूले माउन्ट गर्ने जस्ता केही विशेषताहरू साझा गर्छन्। चिप A9 -64-बिट वास्तुकलाको साथ डुअल-कोर। अर्को वर्ष २०२१ यी उपकरणहरू and र years बर्ष बीचको हुनेछ र त्यसबेलादेखि iOS का सबै संस्करणहरूसँग उपयुक्त छ, आईओएस from देखि आईओएस १ to सम्म। कुल छ वटा प्रमुख अपडेटहरू, यद्यपि पछिल्लो केहि सीमितताहरूको साथ।
यद्यपि पछिल्ला अफवाहहरूले सुझाव दिन्छ कि आईओएस १ आईफोन S एस र एसईसँग मिल्दैन। यदि यो पुष्टि भयो भने, यसले ठूला अपडेटहरूको चक्र बन्द गर्दछ र को रूपमा बाहिर सर्नेछ पुराना दुई उपकरणहरू जुन एप्पल प्रयोगकर्ताहरूको बीचमा अझै वृद्धिमा रहेको छ। यो कदमले यी प्रयोगकर्ताहरूलाई ठूला स्याउका केहि नयाँ उत्पादनहरू जस्तै आईफोन एसई २०२० वा आईफोन १२ लाई प्राप्त गर्नका लागि धकेल्ने एउटा तरिका हुनेछ।
वास्तवमा, फोहरा केलाई औंल्याउनुहोस् iOS १ release रिलीज सेप्टेम्बर २१, २०२१ हुनेछ। यी सबै बाहेक, त्यहाँ यस नयाँ अपरेटिंग सिस्टममा भएको खबर सम्बन्धी कुनै जानकारी छैन। स्पष्ट कुरा के हो भने यो एक अफवाह हो, यो धेरै हुने सम्भावना हुन्छ किनकी नयाँ अपरेटिंग सिस्टमको प्रदर्शन मागहरू यी पुरानो iPhones ले प्रस्ताव गर्न सक्ने प्रदर्शन भन्दा बढी हुन सक्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: आईफोन समाचार » हाम्रो बारेमा » के तपाईंसँग आईफोन S एस वा आईफोन एसई छ?: आईओएस १ तपाईंको उपकरणमा नपुग्न सक्छ